Igama elithi nonwoven lithetha ukuba akukho “ephothiweyo” okanye “alukiweyo”, kodwa ilaphu lingaphezulu. Ukungaluki sisakhiwo sendwangu eveliswa ngokuthe ngqo kwimicu ngokudibanisa okanye ukudibanisa okanye zombini. Ayinalo naluphi na ulwakhiwo lwejometri, kodwa sisiphumo sobudlelwane phakathi kwe ...
Umzi-mveliso wethu unendawo yokuqala yokusebenza engama-6000m2, ngonyaka we-2020, sandise ivenkile yokusebenza ngokongeza i-5400m2. Ngemfuno enkulu yeemveliso zethu, sijonge phambili ekwakheni umzi mveliso omkhulu
Umzi-mveliso wethu uthenge imigca emitsha emi-3 yezixhobo zemveliso ukwanelisa i-odolo yethu yangoku yeekosisi ezomileyo. Ngeemfuno zokuthenga zabathengi ezininzi nangakumbi zokusula okomileyo, umzi-mveliso wethu ulungiselele oomatshini abaninzi kwangaphambili ukuze kungabikho ukulibaziseka kwexesha lokuhambisa, kwaye ugqibe abathengi abaninzi ...
Sinoqeqesho lweqela lokuthengisa rhoqo ukuze siziphucule. Ayisiyo kuphela unxibelelwano nabathengi, kodwa nenkonzo kubathengi bethu. Sijonge ukubonelela ngeenkonzo ezilungileyo kubathengi bethu, sincede abathengi bethu basombulule iingxaki ngexesha lonxibelelwano lokubuza. Wonke umthengi okanye isiko elinokubakho ...
Umahluko phakathi kwelaphu elingaphothiweyo elenzelwe ilaphu kunye nelaphu elingasetyenziswanga elingalukwanga
ngomphathi ku 20-03-16
Amalaphu e-acupuncture angalukwanga awaphothiweyo kwi-polyester, i-polypropylene ekrwada yokuvelisa izinto, emva kwenani le-acupuncture eliza kwenziwa ukusuka kwindawo efanelekileyo eshushu. Ngokwenkqubo, ngezinto ezahlukeneyo, ezenziwe ngamakhulu ezinto zorhwebo. Ihowuliseyili ngelaphu non-ephothiweyo i ...
Ngaba itawuli ecinezelweyo iyalahlwa? Ingasetyenziswa njani itawuli ecinezelekileyo?
Iitawuli ezixineneyo yimveliso entsha kraca esele idumile kule minyaka idlulileyo, evumela iitawuli ukuba zibe nemisebenzi emitsha enje ngokuxabisa, izipho, ukuqokelela, izipho, kunye nokuthintela impilo kunye nezifo. Okwangoku, itawuli ethandwa kakhulu. Itawuli ecinezelweyo yimveliso entsha. Cinezela ...